Dubay - Wikipedia
Metropolis in United Arab EmiratesTemplate:SHORTDESC:Metropolis in United Arab Emirates
Dubay ama dubaay (ingiriis: Dubai, carabi: دبي) wa magaalo ka tirsan 7da imaarood ee Isku taga Imaaraatka Carabta. Magaalada waa magaalo aad u quruxbadan, waana magaalada hormarinteeda aad u soo kordhooso.10 sano ka hor magaalada waxee eheed, Meel saxaaro ah, oo sadax dabaq oo yar yar ku taalay. Markii dhulka lagu arkay saliid, ayee Dubay ku dadaashay, dhismaha magaalada, injineer kasto ayaa kashaqeesto dubay, ayaga oo lacag badan ka helo. dubay waxee ka midtahay, magaalo yaasha ugu casriyeesan, dadka ku nool neh waa dad wada taajir ah. Dubay waxaa kubadan ajnabiga, gaar ahaan, Hindida, soomaali badan xattaa wee degen yihiin. Qaar badan oo ka mid ah magaalooyinka qadiimka ah ee aagga ayaa ahaa xarumo ganacsi oo u dhexeeya dunida bariga iyo galbeedka. Qaar ka mid ah ceelkii mangrove qadiimiga ahaa, oo taariikhdoodu ahayd 7000 BC, ayaa la helay intii lagu jiray dhismaha tuubooyinka bulaacada ee u dhow magaalada Dubai Internet City. Goobtaas waxaa lagu qariyey ciid ku dhowaad 5,000 oo sano ka hor markii ay xeebta dib uga soo baxday gudaha, taas oo ka mid ah xudduudaha xeebta ee magaalada.  Ceramics Pre-Islam ayaa laga helay qarniyadii 3aad iyo 4aad.  Ka hor intaan la soo saarin diinta Islaamka, dadka ku nool gobolkaasi waxay caabudeen Bajir (ama Bajar).  Kadib faafinta Islaamka ee gobolka, Umayyad Caliph oo ka mid ah adduunka Islaamku waxa ay ku soo duushay koonfurta-bari Arabia waxayna ka saartay Sassaaniyiinta. Maqnaanshaha makhaayadda Dubai ee gobolka Al Jumayra (Jumeirah) waxay soo arkeen dhowr waxyaalood oo ka soo jeeda Mudug.  Abaalmarinta ugu horreysa ee Dubai oo ku taala Dubai ayaa ah 1095 oo ku yaal Buugga Juqraafiga ee Jaamacadda Andalusiyanka Carabta ee Abu Abdullah al-Bakri. [Ganacsiga loo baahan yahay] Ganacsiga gaasta Venetian Gasparo Balbi wuxuu soo booqday aagga 1580, wuxuuna xusay Dubai (Dibei) warshadaha.  Dubai waxaa loo maleynayaa in loo asaasay tuulo kalluumeysi ah horraantii qarnigii 18aad, waxaana jirey 1822, magaalo ka kooban 7-800 xubnood oo ka mid ah qabiilka Baniyas oo ku xiran xukunka Sheikh Tahnoon ee Abu Dhabi. [ 32] Sanadkii 1833, ka dib markii ay qabsadeen qabaa'ilka, xubno ka tirsan qabiilka Al-Falasa ayaa ka soocay Abu Dhabi waxaana ay isku dhisteen Dubai. Abuu Zubeyr ayaa waxaa hogaaminayey Ubaid bin Saceed iyo Maktum bin Butti oo noqday hoggaamiyeyaasha isku xira Dubai illaa Ubaid uu geeriyoodey 1836-kii, isaga oo Maktum ka tagay si uu u dhisto dhulkii Maktoum.
Faahfaahin Cimilada Dubai (1984–2017 normals)
↑ . Dubai Meteorological Office https://web.archive.org/web/20131004223556/https://services.dubaiairports.ae/dubaimet/MET/Climate.aspx. Archived from the original on 4 October 2013. Soo qaatay 20 December 2008. Maqan ama ebar |title= (caawin) CS1 maint: BOT: original-url xaalad aan la aqoon (link)
↑ . Climatebase.ru http://climatebase.ru/station/41194/?lang=en. Soo qaatay 10 February 2013. Maqan ama ebar |title= (caawin)
↑ . National Oceanic and Atmospheric Administration ftp://ftp.atdd.noaa.gov/pub/GCOS/WMO-Normals/RA-II/UE/41194.TXT. Soo qaatay 10 February 2013. Maqan ama ebar |title= (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Dubay&oldid=230607"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 11 Febraayo 2022, marka ee eheed 10:31.